Waldhabdee Yunvarsiitii Asoosaatti uumameen lubbuun barattoota sadii darbe - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Hasxaa Yunvarsiitii Asoosaa
Yuuniversitii Asoosaa keessatti waldhabdee namoota dhuunfaa lama gidduutti uumamee gara waldhabdee barattoota Oromoofi Amaaraatti ol guddateen lubbuun barattoota sadii darbee hedduun madaa'uu barattoonni BBC'tti himan.
Ammallee haala yaaddessaa keessa jiraachuu baratoonni dabalanii himaniiru.
Waldhabdeen kun Wixata jalqabee gara gareetti achirraammoo gara sabaatti bababallachuu isaa kan dubbatu Itti Gaafatamaan Gamtaa Barattootaa Yuuniversitii Asoosaa Mohammad Muktaar, barattoota tasgabbeessuun araarri bu'ullee, dubbiin ammas irra deebi'uun haala hin beekamneen guyyaa kaleessaa naannoo kaafteeriyaa barattootaatti dhalate jedha.
Akka Itti Gaafatamaan Gamtaa Barattootaa kun jedhutti dhimmi kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu deebii barbaachisaa hin kennine.
Barattoota haaraa gidduutti kan uumame yommuu ta'u tokko Amaaraa tokkommoo Oromoodha. Sana booda gareedhaan wal reebuun eegalame, jedha barataa Mohaammed.
Dubbiin gaafa hammaatu humnoonni nagaa eegsisan gidduu seenanii erga qabbaneessanii booda, Oromoorraas Amaararraas namoota shantama shantama filannee bakka abbootiin amantaa, jaarsoliin biyyaafi hooggantoonni hundinuu jiranitti araarri bu'ee ture jedha.
"Isa booda nuti biyyi nagaadha jennee gaafa gara hojiitti deebinu kaleessa ammas irra deebiin waltumuu eegalan."
"Hanga sa'atii sagaliitti itti fufe. Amma barattoonni Amaaraafi Oromoo gargar jiru. Haalli jiru yaaddessaadha. Barattoonni garee gareesaaniitiin bakka adda addaa jiraataa jiru. Haalli nyaataafi doormii rakkisaadha. Qaamni dhimmi ilaallatu deebii hatattamaa hin kennine," jedha Itti Gaafatamaan barattootaa.
"Hawaasni yuuniversitichaas kan ministieera barnootaas rakkinicha furuurra callisa filatan. Inumaa hooggantoonni olaanoon naannolee lameenii akka mari'atanii sirreessan barbaanna.''
Hoji geggeessaan Hospitaala Walii Galaa Asoosaa Obbo Kamaaladdiin Alfaqii barattoonni dhagaafi uleedhaan miidhaman hedduun jedhu, kan du'anillee kanumaan ta'uu dubbatan.
Walitti bu'iinsa barattoota Yuuniversitii Asoosaa gidduutti uumameen namoonni afurtamni miidhamanii dhufaniiru kan jedhu Obbo Kamaaladdiin, "Kannen keessaa sadi du'aniiru" jedhan.
"Namoota miidhaman keessaa shanii hanga ja'aa kan ta'an ammallee hospitaala ciisanii wal'aanamaa jiru".
Akka Obbo Kamaaladdiin jedhanitti, namoonni midhamanis ta'e kanneen lubbuunsaanii darbe uleefi dhagaadhaan reebamaniiti.
Namoonni wal'aanamaa jiran fayyummaansaanii haala gaariirra jira. Har'ammoo namni miidhamee dhufe hin jiru.
Komishinarri Komishinii Poolisii Mootummaa Naannoo Beenishaangul Gumzi Sayfaddiin Haaruun araara buusuuf yaalii taasiafamus ammallee barattoota Amaaraafi Oromoo gidduutti wal balaalleffannaan jira jedhu.
Kanaafuu nageenya eegsisuuf raayyaan ittisa biyyaa, poolisiin federaalaafi korri bittinneessaa naannichaa qindoominaan hojjechaa jiru jedhan.
Ministeerri Barnootaa gamasaatiin rakkoo nageenyaa Yuuniversitii Asoosaatti mudaterratti ibsa baaseen qaamolee mooraa dhaabbilee barnootaa keessa nageenyi akka hin jiraanne barbaadantu kana duuba jira jedha.
"Kanneen walitti bu'iinsa saboota gidduutti uumuun yuuniversitoota iddoo jeequmsaa gochuu fedhantu hojiisaanii hojjechaa jira waan ta'eef hawaasni Yuuniversitichaa xiyyeeffannaan hojjechuu qaba" jedheera.
Ministirri Saayinsiifi Dhaabbilee Barnootaa Olaanoo Dr. Hiruut waldamaariyaam waldhabdee barattoota saba Amaaraafi Oromoo gidduutti Yuuniversitii Asoosaatti mudateen barattoonni sadi du'anii kaanirra miidhaan ga'uu ibsaniiru.
Rakkoo kana hundeerraa furuuf hooggantoonni olaanoon Ministeeraa isaaniirraa, Boordiin Yuuniversitichaafi bakka buutonni saboota lameenii hawaasa yuniversitichaa waliin ta'uun nagaa buusuuf garas akka imalan ibsaniiru.